Nezvedu - Xiamen Jingqi Rubber & Plastic Co, Ltd.
Silicone Keke Molds
Silicone Ruoko Ruvara
Silicone Ice Bhora Molds
Silicone Kufamba Inotakura Bhodhoro
Silicone Kicheni Zvishandiso
Silicone Vana Chigadzirwa
Silicone Rubber Maketeni
Xiamen Jingqi Rubber & Plastic Co, Ltd yakagadzwa kwemakore anopfuura 9 muguta rakanaka-Xiamen. Tinotarisa pakugadzira Silicone uye Rubber zvigadzirwa uye silicone kicheni zvishandiso. Ivo vanonyanya kusanganisira iyo silicone ice mold, keke mold, spatula, Chitsva Kavha, kusimudzira zvinhu uye ese ese marudzi eOEM silicone zvinhu. Iye zvino, yedu fesiti ine 1000-mativi-emamita musangano unowanikwa kuGuankou, Xiamen. Kune boka revashandi vane ruzivo uye vane hunyanzvi vekugadzira tekinoroji yekugadzira uye michina yekuedza muchina chedu, saka kugona kwezuva nezuva kwekugadzira kunogona kusvika zviuru zvemazana.
Isu tiri kuomerera kune bhizinesi rekufunga kwe "Vatengi Chekutanga, Forge Mberi", tichitevera mutemo we "Vatengi Chekutanga" kupa vatengi vedu mabasa akanaka emhando.
Gamuchira kutarisisa kwako!
Kuchiva dzakasiyana-siyana dzeasilone zvigadzirwa zvinoenderana nemutengi, Inzwa wakasununguka kugoverana nesu nezvenyu zano, tichaita kuti iwe uuye kuzononoka.
Xiamen Jingqi rabha repurasitiki fekitori inogadzira kambani kugadzira uye pruduce silicone kicheni maturusi, ice cube tray, keke maumbwa uye silicone zvipo. tirikuenderera mberi kugadzira hunyanzvi mukugadzirwa kwechigadzirwa.
Nguva dzose kugadzira nyowani itsva silicone chigadzirwa.
Boka redu rakatungamirwa inyanzvi yekugadzira iyo ine anopfuura makore gumi ruzivo. Izvo zvakange zvakarongedzwa nemumwe maneja maneja, 1 fekita director, 1manager, 5 chigadzirwa inspector uye 3 munhu wekutengesa zvinhu 30 zvakajairika zvinhu.
Ko Silicone Ice Cube Trays Akachengeteka?
Zhizha rasvika, uye izvo zvinoreva kuti iwe unenge uchitora nguva yakafanira uchiedza kuti ugare uchitonhorera. Imwe yedzimwe nzira dzinokurumidza kupora kubva mukati kubva mukati: Hapana chakafanana nechinwiwa chinotonhora echando kuunza kudzora tembiricha yako uye kukubatsira kuti unzwe kuzorodzwa pazuva rinopisa. Nzira yakanaka yekuwana ...
Chii Chinoita Kuti Silicone Kicheni Zvishandiso Zvakasiyana?
Silicone zvishandiso zvekicheni nemidziyo yekubheka ine hunhu hunopa zvimwe zvakanakira pamusoro pesimbi yavo, mapurasitiki, rubha kana mapuranga. Mazhinji ezvigadzirwa zveasilone zvinouya nemavara akapenya. Kunze kweizvozvo, ngatitarisei humwe hunhu hwavo uye kuwona kana silicone kicheni ...
Nha .43 XiaCun ShangTang Village Guankou Town JiMei District Xiamen Fujian China